Agaghị m Barnes na ndị a ma ama taa! | Martech Zone
Agaghị m Barnes na ndị a ma ama taa!
Ha wuru a Barnes na ndị a ma ama n'ime a kilomita ole na ole nke ụlọ m na ọ bụ n'ezie a pụtara ụlọ ahịa. O yiri ka ọ na-esiri m ike ịchọta akwụkwọ m ebe ahụ. Ibe ala O yiri ka ọ nwere ụzọ ka mma iji hazie shelf ha.
Ka o sina dị, enwere m obi ụtọ n'ụlọ ahịa abụọ mana achọtara m onwe m na Barnes na ndị a ma ama n'ihi na ha nwere Starbucks nke nwere Ikuku na AT&T. Adịbeghị m ala ruo nwa oge - enwere m olile anya na ha enwetala ohere na mgbakwunye T-Mobile.
Na agbanyeghị - Abụ m akwụkwọ akwụkwọ ma nye akwukwo akwukwo site n'aka Barnes na ndi amara (ma Amazon) ma naanị ndị Ala na-echeta ihe taa bụ:
Bkèala ahụ wepụtara oge iji chepụta ọmarịcha email dị ka nke a NA zitere m dere na 25% kwụsịrị dị oke mma ma agaghị echefu m. Ọ na-ada ka Ndi ala nwere ike itufu agha nye Barnes na ndi amara - mana, ewezuga ọnọdụ dị mma, amachaghị m etu esi.
Site n'ụzọ, Abụ m nnukwu 4-0 taa! Woohoo!
Tags: Auditing ikaigwe-ojiígwé ojii Mgbakọígwé ojiiakụkọ ihe mere emeụlọ ọrụ
Uche Gị Dịịrị Anyị
Apr 19, 2008 na 8: 12 AM
hoppy nnụnụ ụbọchị abụọ nne
obi ụtọ nnụnụ ụbọchị hụrụ n'anya Doug
Apr 19, 2008 na 9: 07 AM
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ Doug.
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ gị, Doug!
(afọ 39, n'onwe m)
Ezi ncheta ọmụmụ. Doug.
Apr 20, 2008 na 8: 35 AM
Ezi ncheta ọmụmụ! O meela oge… ka anyị jidere kọfị!
Apr 20, 2008 na 10: 04 AM
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ Doug… naanị ị jidere m (mana m ga-anụ ọhịa n'ihu n'ihu Septemba). 🙂
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ Doug!
Enwere m olile anya na ịchọta ihe dị ukwuu iji coupon gị.
Apr 21, 2008 na 7: 18 AM
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ m gwuru, enwekwara m ụbọchị ọmụmụ ụbọchị abụọ gara aga
Apr 21, 2008 na 7: 46 AM
Apr 22, 2008 na 12: 36 AM
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ Doug! Ike ka diri gi!
Mee 9, 2008 na 6: 43 AM
Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ na ụbọchị ọmụmụ na-atọ gị ụtọ Kartenlegen kwa